Itoobiya: Waa in &#039;la adkeeyo guulihii&#039; la gaaray ka... | Universal Somali TV
Itoobiya: Waa in 'la adkeeyo guulihii' la gaaray ka hor inta aan la qaadin xaalada degdeg ah
January 10 2017 13:18:22
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya, Hailemariam Desalegn, ayaa sheegay in dalka uu u baahan yahay in la adkeeyo guulihii la gaaray tan iyo bishii October ka hor inta aan la qaadin xaaladda degdeg ah uu ku suganyahay dalka.
"Ilaa hadda waqtiga la joogo arinta ku aadan xaalada degdegga marka la eego, waa in la qiimeeyo waxa noo suura galay si loo hubiyo guulihii aan gaarnay ilaa hadda," Ra'iisal Wasaaraha ayaa ku sheegay shir jaraa'id.
Waxa sidoo kale la xoojin doona booska taliska maamulka gobolka ee la socday xaalada degdegga ah, in tillaabada xaalada deg deg ah ay ka caawisay xasiloonida ama wax ka badashay xaalada dalka Geeska Afrika.
Dalka ayaa la dhibtooday dibad baxyo looga soo horjeeda dowladda gaar ahaan gobollada Oromo iyo Amxaarada iyadoo falcelinta ciidamada ammaanka ay sababtay dhimasho iyo xadhiga baahsan ee ololeeyayaasha, kuwaas oo qaar ka mid ah dawladda ay sheegtay 'in ay wacyigalin ku suubiyeen' oo la sii daayay intii kalena ay sugayaan maxkamad.
Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku qiyaasay in ka badan 500 oo qof ay nafahooda ku waayeen rabshadaha ku faafay gobollada ay u badanyihiin mucaaradka siyaasadeed.
Dibad baxa ugu horeeyay ee bilaabmay bishii November 2015 ayaa waxaa keenay caro ka dhalatay nidaamka horumarinta ee caasimada , laakiin markii danbe ku ballaadhatay wicitaanada xuquuqda siyaasadeed.
Kan-xigaMadaxweynaha Ivory Coast oo casilay 3...
Kan-hore13 ciidamada ammaanka Masaarida oo la...
33,284,330 unique visits